Ukwabelana Ngempumelelo Nokwehluleka Kwethu kuka-2015! | Martech Zone
Ukwabelana Ngempumelelo Nokwehluleka Kwethu ka-2015!
NgoMgqibelo, Januwari 2, 2016 NgeSonto, uJanuwari 3, 2016 Douglas Karr
Hawu, unyaka onjani lona! Abantu abaningi bangabheka izibalo zethu futhi baphendule ngazo mina… Kodwa besingeke sijabule ngokwengeziwe ngentuthuko eyenziwe yisiza ngonyaka odlule. Ukuhlelwa kabusha, ukunakekelwa okwandisiwe kwekhwalithi kokuthunyelwe, isikhathi esichithwa ocwaningweni, konke kukhokha kakhulu. Sikwenze konke ngaphandle kokunyusa isabelomali sethu futhi ngaphandle kokuthenga noma iyiphi ithrafikhi… konke lokhu kukhula ngokwemvelo!
Ukweqa izikhathi ezivela emithonjeni yogaxekile yokudlulisa, nazi izibalo zethu zokugcina zonyaka nonyaka uma kuqhathaniswa no-2014:
sessions phezulu i-14.63% ukuze 728,685
Ithrafikhi ye-Organic phezulu i-46.32% ukuze 438,950
Abasebenzisi phezulu i-8.17% ukuze 625,764
Ukubukwa kwekhasi phezulu i-30.13% ukuze 1,189,333
Amakhasi ngeSeshini phezulu i-13.52% ukuze 1.63
Isikhathi Sesikhathi phezulu i-4.70% kuya kumasekhondi angu-46
Isilinganiso se-Bounce phansi i-48.51% kuya ku-36.64%
Izikhathi Ezintsha phansi i-5.63% kuya ku-85.46%
Nakulokhu… hhayi nepeni elisetshenziswe ekuthuthukiseni okuqukethwe futhi sakubona lokho kuhlanganyela! Ngokwakhiwa kwesiza esisha, sigxile kakhulu ekusheshiseni nasekuphenduleni - futhi ngikholwa ukuthi kutholile.
Faka incwadi yethu yezindaba ye-imeyili, abafundi bokuphakelwa, abalandeli bezenhlalo, ababekhona kwi-webinar, abalaleli be-podcast kanye nababukeli bevidiyo futhi sifinyelela kalula ochwepheshe abangaphezu kwesigidi ngonyaka ngalolu shicilelo.
Ngenxa yokubambisana kwethu ne IBlueBridge, futhi sinesicelo esisezingeni lomhlaba esibuyekezwa ngokuzenzakalela njengoba sikhiqiza okuqukethwe kuzo zonke iziteshi zethu.
Sinobambiswano olumangalisayo naye Umphetho Womsakazo Wewebhu ekukhiqizeni i-podcast futhi sifuna ukwandisa ukufinyelela kwethu kulo nyaka njengoba sivule okusha kwethu istudiyo se-podcast enkabeni yedolobha i-Indianapolis emahhovisi ethu. Manje, noma nini lapho sinomholi ehhovisi lethu singahlala phansi siqophe! Futhi sinezintambo ze-Skype ngqo kusihlanganisi sethu sezindawo ezikude.
Uma uke waba ngumfundi wami, uyazi ukuthi nami ngiyathanda ukwabelana ngamaphutha ami. Mhlawumbe okukhulu kunakho konke wethula umkhombandlela wensiza. Umbono wethu ngalokhu kushicilelwa ukuthi uma uvakashela noma iyiphi indatshana esizeni sethu, ungahambisa ngqo kumkhiqizo noma uthole usizo kumhlinzeki wesevisi ofanelekile. Sethule umkhombandlela wensizakalo, sitshale imali encane, futhi yavele yaphaphalaza. Ukungasho ukuthi empeleni besingenazo izindlela zokuzihlanganisa nesayithi lethu. Sisebenza nokunye ukuqala manje ukwenza lokho kwenzeke. Ngaphandle kokugxila, isabelomali, noma amandla, bekungekho maningi amathuba okuthi yethulwe ngempumelelo. Kepha sizofika lapho!
Siphinde senza intuthuko enkulu yokuhlanganisa amaphepha amhlophe ukuze abizelwe esenzweni. Lokhu kuzohlinzeka abafundi bethu ngethuba lokusuka ekubukeni okuphelele kokuthunyelwe bese bathuthela ekujuleni okujulile nemibiko. Siphushe ukuhlanganiswa bukhoma futhi ngokushesha sahlangabezana nezinkinga zokuphuma kwesikhathi. Sikholwa wukuthi lesi yisici esimangazayo, kepha kudingeke ukuthi sikubeke emuva lapho sisebenzela ukuthuthuka kwabaphambili.
Njengenjwayelo, qiniseka ukubonga abaxhasi bethu ngezansi futhi ubasekele nganoma iyiphi indlela ongakwenza ngayo! Futhi usazise ukuthi ucabanga ukuthi singakwazi kanjani ukuthuthukisa ukushicilelwa!
Tags: 2015izinga lokunciphisaDK New MediaUkumaketha i-Podcastochwepheshe bezokumakethaibhulogi lobuchwepheshe bokumakethaAmavidiyo Wokumakethaizikhathi ezintshai-organic trafficukubukwa kwekhasiamakhasi ngeseshini ngayinyeubude besikhathisessionsabalandeli bezenhlaloabasebenzisiababukeli bevidiyoizivakashiAbabekhona kwi-webinarukubuyekeza unyaka
Izindlela ezi-5 zokwandisa ukufinyelelwa okungokwemvelo ku-Facebook
Ukwenza amandla Iphrofayili Ye-Linkedin Yokuthengisa Komphakathi